Indlela Esifunda Ngayo I-imeyili Yomsebenzi Iyashintsha | Martech Zone
Indlela Esifunda Ngayo I-imeyili Yomsebenzi Iyashintsha
NgoMsombuluko, Okthoba 16, 2017 NgoMsombuluko, Okthoba 16, 2017 Douglas Karr
Ezweni lapho kuthunyelwa i-imeyili eningi kunakuqala (kufika kuma-53% kusuka ngo-2014), ukuqonda ukuthi iziphi izinhlobo zemilayezo ethunyelwayo, nokuthi leyo milayezo ithunyelwa nini kulusizo futhi kubalulekile. Njengabaningi benu, ibhokisi lami lokungenayo alilawuleki. Lapho ngifunda mayelana ibhokisi lokungenayo u-zero, Angikwazi ukuzibamba ngibe nethemba elincane mayelana nevolumu nendlela ama-imeyili aphendulwa ngayo.
Eqinisweni, ukube bekungekho SaneBox futhi I-MailButler (ngisebenzisa izixhumanisi zami zokudlulisela lapho), angiqiniseki ukuthi ngizoyiphatha kanjani i-imeyili yami. I-Sanebox yenza umsebenzi omuhle ekufundeni ukuthi yimaphi ama-imeyili wami adinga ukunakekelwa ngokushesha futhi iMailButler inginikeza ithuba lokubambezela izimpendulo, ukusnuza ama-imeyili, futhi ithuthukise i-Apple Mail ngezinye izici eziningi.
Ngokufana ngawo womabili amapulatifomu ukuthi ibhokisi lokungenayo lami lisetshenziswa phakathi kwamafolda. Angikhawulelwanga ku-Ibhokisi lokungenayo kuphela, ifolda engenamsoco, nodoti futhi… lezi zinhlelo zihambisa imiyalezo ngaphakathi nangaphandle kwamanye amafolda. Yize lawa kungamathuluzi amahle kimi, kumele enze umonakalo kumamethrikhi we-imeyili abathumeli abazama ukungithinta. Ukuziphatha kwe-imeyili is Ukushintsha, futhi la mathuluzi ayisibonelo esisodwa sendlela.
Ukucwaninga izinguquko zokuziphatha kwe-imeyili, iReachMail isanda kuhlola abantu abayi-1000 ukuthi bafunde ukuthi kusho ukuthini ukuphatha amabhokisi abo okungenayo. Okunye okutholakele okubalulekile:
Imeyili yasekuseni - Abantu baseMelika abangama-71% bahlola okokuqala phakathi kuka-5 ekuseni no-9 ekuseni iNew York neNew Jersey balinganisa isheke lokuqala lakamuva — ngaphambi nje kuka-9 ekuseni — nabantu base-Utah bahlola kuqala, ngemuva nje kuka-6: 30 ekuseni, ngokwesilinganiso.
I-imeyili Yantambama - Ama-30% aseMelika ahlola ngaphambi kuka-6 ntambama no-70% ngemuva kuka-6 ntambama ama-46% ama-Virginians ahlola i-imeyili yawo okokugcina phakathi kuka-9 ntambama naphakathi kwamabili, kanti amanye angama-13% aqeda ngemuva kwamabili. Okungafanele kuphelelwe yisikhathi, ama-71% amaTennesse angama-owl asebenza nabo ebusuku, ahlola i-imeyili yawo ngemuva kwe-9 pm, futhi nje ama-12% abheka okokugcina ngaphambi kwe-6 pm, ngaphansi kwesilinganiso sikazwelonke.
Ukuthumela ama-imeyili - Cishe isigamu sabo bonke abantu baseMelika (46%) bathumela ama-imeyili angaphansi kwayishumi ngosuku. Abantu abangama-10% bathumela ama-imeyili ayi-30 kuye kwangama-10 ngosuku, ama-25% athumela angama-16 kuye kwangama-25, kuthi angama-50% athumela ama-imeyili angaphezu kwama-8 ngosuku. INtshonalanga inesilinganiso esiphansi kakhulu sama-imeyili athunyelwe, ku-50 ngosuku. I-Northeast idlula zonke izifunda kanye nezilinganiso ezingama-18 ezithunyelwa ama-imeyili ngosuku, kuyilapho iMassachusetts inezinga eliphezulu kuzwelonke lama-imeyili angama-22 athunyelwe ngosuku, ngokwesilinganiso.
Isikhathi sempendulo - Ama-58% aseMelika athi aphendula kuma-imeyili kungakapheli ihora elilodwa. Ama-26% aphendula kungakapheli ihora elilodwa kuya kwayisithupha, ama-11% aphendula kungakapheli amahora ayisithupha kuya kwangu-24 kuthi ama-5% asele aphendule ngemuva kwamahora angama-24, ngokwesilinganiso. AmaVirginians abika izimpendulo ezisheshayo ze-imeyili nesikhathi esimaphakathi sokuphendula esingaphezu kwamahora amabili nje vo. AbaseNew York, ngokumangazayo, baphela kancane — ama-12% athi balinganisela usuku noma ngaphezulu ukuphendula kanti ama-33% athatha okungenani amahora ayisithupha.
Ama-imeyili angafundiwe - Abangaphezu kwesigamu sabaseMelika banama-imeyili angaphansi kuka-10 angafundiwe ebhokisini labo lokungenayo. U-26% ubika ukuthi unama-imeyili angaphansi kwama-50 angafundiwe, ama-13% anama-imeyili angaphezu kwama-100 angafundiwe kanti ama-6% anama-50 aphakathi kuka-100. ISouth Carolina ibika ama-imeyili angafundiwe kakhulu, anesilinganiso sama-29, kanti ama-30% amaTennesseans abika ukuthi ama-imeyili angaphezu kwama-100 angafundiwe. IMidwest inezimbalwa kakhulu, ezinesilinganiso esingu-17.
IReachMail ikhiqize le infographic: Ibhokisi Lemilayezo Engenayo LaseMelika 2: The Reckoning ukukhombisa izinguquko.
Tags: ibhokisi lokungenayo laseMelikaibhokisi lokungenayo laseMelika 2izikhathi ze-imeyili ezivulekileisikhathi sokuphendula nge-imeyilimangaki ama-imeyiliumlimi weposifinyelela imeyilisaneboxukubalaama-imeyili angafundiwe
I-SEO: Amathrendi ama-5 wokuSebenzisela i-Google Organic Search
Ungawasebenzisa Kanjani amagama angukhiye Ngokuphumelelayo kwe-SEO nokuningi